2021-02-25Thursday	सिरानचोक गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र चित्रेपोखरी कायम, ५ मत भने छोप्राक मैदानका पक्षमा – खोजखबर – Hamro Nepal
सिरानचोक गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र चित्रेपोखरी कायम, ५ मत भने छोप्राक मैदानका पक्षमा – खोजखबर
गोरखा, असार ३१ गते ।
अस्थायी रुपमा छोप्राक मैदानबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको सिरानचोक गाउँपालिकाको स्थायी केन्द्र चित्रेपोखरी कायम भएको छ । बुधबार बसेको गाउँसभामा अधिकाशं सदस्यले चित्रेपोखरीको पक्षमा मतदान गरेपछि लामो समय देखिको केन्द्र विवाद टुंगिएको हो । ‘वडा नम्बर ४ बाहेकका सबै साथिहरुले चित्रेपोखरीमा हुनुपर्छ भनेर मत जाहेर गर्नुभयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले भने,‘ढिलै भएपनि केन्द्र निर्धारण भएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
गाउँसभाका ४२ सदस्य मध्ये ३७ जनाले चित्रेपोखरीको पक्षमा मतदान गरेका छन् । बाँकी ५ जना भने साबिकको छोप्राक मैदानमै केन्द्र हुनुपर्ने भन्दै उक्त प्रतास्वको विपक्षमा उभिएका थिए । यस अघि सिरानचोकको १६ कार्यपालिका सदस्य मध्ये १४ जनाले चित्रेपोखरीमा केन्द्र कायम गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कार्यपालिकाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गरि उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेकपाबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरु बिमला गुरुङ र गंगा सुनारले चित्रेपाखेरीमा केन्द्र निर्धारण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रीता देवकोटा, संसदीय दलका नेता जयकृष्ण ढकाल, वडा नं. ३ का अध्यक्ष वीरबहादुर थापा, वडा नं. २ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङ, वडा नं. ६ का अध्यक्ष नारायणबाबु दानीले समर्थन जनाएका जनाएका थिए ।
नेपाली काँग्रेससँग दुई तिहाई बहुमत भएपनि आपसी सहमती जुट्न नसक्दा केन्द्र निर्धारणको प्रस्ताव बारम्बार अस्विकृत हुँदै आएको थियो । अहिले नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युष्टि पार्टी नेकपा र जनता समाजवादी पार्टी वीच सहमतीको आधारमा केन्द्र निर्धारण भएको हो । ‘वडा नम्बर ४ का साथीहरुले आफ्नै भूगोलमा केन्द्र हुनुपर्छ भन्नुभएको हो, उहाँहरुको मतको हामी सम्मान गर्छौैं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘यो एउटा प्रक्रिया हो । यसलाई टुंग्याएका छौं । यसमा पक्ष विपक्षको कुनै कुरा छैन । अब हामी सबैलाई समेटेर अघि बढ्छौं । ’
केहि दिन भित्र जग्गा एकिन गरेर अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालन गरी चित्रे पोखरीबाटै काम गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । ‘हामीलाई त्यहाँ ७० रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । कानून अनुसार उक्त जग्गा गाउँपालिकाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अस्थायी संरचना बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्छौ । अबको २ वर्षमा स्थायी संरचना पनि निर्माण गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाको स्थायी संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । अधिकाशं वडाहरुको वीच भागमा पर्ने मोटरबाटोले छोएको चित्रेपोखरीमा केन्द्र निर्धारण भएसँगै बहुसंख्यक सर्वसाधरण खुसि भएका छन् ।
केन्द्र निर्धारणसँगै गाउँसभाले ६४ करोड ११ लाख ४३ हजार ४४० रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसले सिर्जना गरेको समस्या समाधानमा केन्द्रित रहने उपाध्यक्ष रीता देवकोटाले बताइन् । गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमतीले पारित गरेको छ ।
abiJuly 15, 2020 News No Comments »
ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको बैठक बालुवाटारमा सुरु – Online Khabar :Newer
Older: शाही र कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस – Online Khabar